Author: Kazrasar Kigall
Kuye “daayinkiisii Denbi dhaaf ha siiyee Sawti duugti loo qalay Ducadii adoogeen” Wuxuu yidhi “duqeennii Degta inagu sidi jirey Isaguna ma dubuq yidhi? Abaaludda loo dareershay, Ka rog oo haddana saar Sidig maqan ninkeedii Talo waw sar go’ay tahay Jid-Siraad korkiisiyo Suudaa la marayaa Sanadaa la dhaxayaa Sahay lagama maarmee Ha la jiro sibraarada.
Wuxu yidhin “dabaalkii Lafii Daabbad qaarkood Sow duleedka kama helin Duf ku bexe wedkiisii Doqonniino gurayaa Nacasnimo daldalayaa Dabadeeto eedyaa”.
Shidaad naga oollin maysid, Qorannimada waa tii Qoor-gooyo laqan iyo Qaryad weer cad xidhatiyo Lagu helay qisaastee Hadmaa qaabkan loo roggey? Shan afraad shan afraad Birta kii hadtaawi aslaa Oori deydeyayee Aroosow magacaa? Jidku qarar xidhiidhiyo Qodax iyo dhib badanaa Qaringaynu joogniyo Qard-jeex yays baray?
Asaayo maxaa ka beermay! Cilmigan dib u heego dhaca Hadduu wacadkiisa iibsho, Carra-edeg xanteediyo Xaska weli dhex-yaalliyo Xaskulaha in laga guro Danahooda xigashiyo Xagal-daac in laga jiro Tii loo xil-saaraay.
Isla-weyn qabkeedaa Wiyil aan jaraysnayn Ugu wadha maqaarkoo Lugta webi u geliyee, Haddaan weel gun laga tolin Waayaha adduunyada Xog-ogaal la weydiin Ruuxii gu’kaa weyn Lagu odhan wax ii sheeg Taladaadu wiilooy Dalab waayi maysoo Qofna waari maayee Mudanaha walaalkaa Haddii weerar lagu dilo Isha lalama waabtee Weerkiyo baroorta Dadka lala wadaagaa. Sumaddeedu waxay tahay Roob saaka da’ay baa Sar-ka dhaban la yimiyoo Anna seexan maayee Saaxiib ma nabad baa? Basaastiyo oonka daawo, Ban aroori kaxaa Mar ugbaadku simaa Dhal aboodi halkuu Ogxantiisa dhigtaa Aadamuu mar jantaa Meel aboor degey baa Mar iftiin ka baxaa Gole aammus badnaa Mar mar baa idhi taas Anda-qaad ku bataa.
Gabdhayahow sidee waaye Ilbaxnimadu saas maaha Hadba suf karkaro maaha Sararaha bannee maaha Qorqor suunniyaa maaha Dhabanada sibbaaq maaha Sanka oo la mudo maaha Sakhrad iyo xashiish maaha Sawir iyo riyaaq maaha Filin iyo sarcaad maaha Saxan reer galbeed maaha Kabo sookal dheer maaha Suuriyo durduro maaha Salsalaw cid kale maaha Qof silloon ku dayo maaha Wax sawaaban noqo maaha Sinta iyo lafaa duudka Saddex goor jejebi maaha Dhaqankaaga saydh maaha Soomaali diid maaha Sidaad doonto yeel maaha Dhulka oon ku sidi waayin Samadoo la koro maaha Xilliyada wax saareenka Iyo saacadaa reebban Sabbadiyo rugtay joogtey Gabadh timi ma saalloona Ku salliya Rasuulkiina C.
Nin ku yidhi anaa saasa Ha ku odhan sidaas weeye Sida uu ku gabauada heedhe Haddii ay siniin weydo Ama sarin sanaan weydo Waxa furan sidaas maaha Qof saluugey maankiisa Ama suufay muuqiisa Ka sal kacay xaqiiqdiisa Qabku saami ladha maaha Nin sitaba bar baa saran Ninka sii sitaa jooga Raggannimada sooceeda Adigoo sagaal buuxshey Hal hdraawi seegay baa yaalla.
Rag dagaal isugu yimi Haddaan guuli kala dirin Ama duubi wada jabin Isma dooda dhuuxdee Marka dhaylo dubantee Digsi haadraawi kulkaan bado Iska rogo daboolkee Fadhi dagagar yeeshaan Garan dooca hadalkee Debci qori hay faro.
Waabayda udugga leh Idin laygu shidi jirey Abbaartayda saakana Ma adeeridii baa?
Adaan dib u qoomamayn Runteeda qofkii duwaa Aleelaha guudka daawo, Ka muuqda adduunyadeenna, Hubkooda dayaanka dheer Sumadeedu waxay tahay Inta waranka sooyaan Samaydii ka maqan tahay Inta laba su’aalood Sakaluhu dhex yaalliin Inan dunida saabkiyo Laga saarin tiirkoo Qorraxdana siraadkiyo Laga siibin nuurkoo La afuufin suurkaan Rabbigay ka sugayaa Sumadeedu waxay tahay Ninka ootay seeraha Saxarlana ku guursaday Haddii uu nin sare yahay Aan laga sed qaadayn Saadaasha mooyee Si kalaan ka yeelaa Suuroobi maysee Aniguna sidaydaba Soddohaa rag kale qabo Kuma toobbad seegee Sumaddeedu waxay tahay Sidi-qabax shan maalmood Sahay loogu talo galay Soddon laguma gaadhee Hadal lama sudhnaadee Saaxiibkay Qaysow Waxaad Suuban leedahay Saca Hadraasi nacayow Sagaal beri adoo qaday Samsam iyo Bullaalaa Saarkaagu kaa hayn Saxarlaay ma kula tahay?
Islaan curadkeeda weyday, Caqaar ku aroosta maaha, Dadyow geeddigeennii, Beryo lagu galoollaa, Ma dhammaan ka guur baa? Ragga daawadii furay Ama daacaddi jaray Ama qaranka duudsiyey Hantidii dadweynaha Dacallada ka buuxsadey Dalku eed ku leeyahay Rag la deydeyaayoo Dedan oo qarsoonoo Damacooda xeel iyo Ku darsaday tab hoosoo Wixii deyn ku soo baxa Berri diidi karayoo Dufankiyo karriinkii Iska duugey maahee Sida buurta Daalood Gbaayada fog bay ka muuqdaan Diricaasi waa kuma?
Waxa ay si gaar ah uga hadlaysaa Dhibaatada Qaadka iyo Rabiyo dadkaygana danwadaag gsbayada darjaysa qarankiyo bulsho laga dabqaatoo Carro Edeg ku dayatiyo ka dhig ul iyo diirkeed. Mise waa lug iyo gacan labadaba ku garangari.
Ma haeraawi qandoodiyo Saadaal qallalanoo Lagu qiil banaystiyo Riyo qabaxtankeediyo Qaadaa dheggeediyo Qashar iyo salool baan Qalalaasahaan gabay Ii gumiya leeyahay Ma quruumo ciiddiyo Qawlallada aboorkiyo Inta dulin qadhaabtiyo Qablantadu ku kulantee Canka lagu qadhiidhiyo Qabri lagu ducaystay Qabyaday ku xidhan tahay Ma qorshaa badheedhkiyo Quxub lagu hirgeliyee Qori tuurka Saadooy Lagu kala sed qaatay Qadder dhacay u haystaan?
Afkaagana dhawri maysid, Murzal Mohamed Personal Blog. Hadduu marba iil banneeyo, Af-duub iyo beeno tahay, Ummuuraha duur xulka ah